Isiphanyeko Factory | I-China Hanger Manufacturers, Abahlinzeki
Ama-Minions hook (2pk) CH-6579
I-LONGSTAR Minions wall hook, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eziqinile. Iyilayisha kanzima, ingalayisha i-1.5kg; Uma usebenzisa, sicela usize Hlanza udonga kuqala bese ulinamathisela ngemuva kokuthi lomile, bese usula ifilimu lokunamathisela ngemuva kwehhuku bese ulinamathisela odongeni kulungile, kungcono ukulengiswa ngemuva kwamahora ayi-12, kungaba ngaphezulu ihlala isikhathi eside ； Futhi ayinamanzi, sicela ukhululeke ukuyisebenzisa; Futhi ngephethini lama-minions, libukeka linempilo futhi lihle.
Ama-Minions hook (2pk) CH-6582
I-LONGSTAR Minions wall hook, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eziqinile. Iyilayisha kanzima, ingalayisha i-2.0kg; Uma usebenzisa, sicela usize Hlanza udonga kuqala bese ulinamathisela ngemuva kokuthi lomile, bese usula ifilimu lokunamathisela ngemuva kwehhuku bese ulinamathisela odongeni kulungile, kungcono ukulengiswa ngemuva kwamahora ayi-12, kungaba ngaphezulu ihlala isikhathi eside ； Futhi ayinamanzi, sicela ukhululeke ukuyisebenzisa; Futhi ngephethini lama-minions, libukeka linempilo futhi lihle.
Amanxusa isiphanyeko (4pk / isethi) CH-6396
I-LONGSTAR Minions hanger, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eziqinile futhi ezingashibilikisi. Iyajika.
Amanxusa hook (2PK) CH-6507
Amanxusa hook CH-6377
I-LONGSTAR Minions wall hook, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eziqinile. Ilayishwa kanzima, ingalayisha i-3.0kg; Uma usebenzisa, sicela usize Hlanza udonga kuqala bese ulinamathisela ngemuva kokuthi lomile, bese usula ifilimu lokunamathisela ngemuva kwehhuku bese ulinamathisela odongeni kulungile, kungcono ukulengiswa ngemuva kwamahora ayi-12, kungaba ngaphezulu ihlala isikhathi eside ； Futhi ayinamanzi, sicela ukhululeke ukuyisebenzisa; Futhi ngephethini lama-minions, libukeka linempilo futhi lihle.
Ama-Minions hook (2pk) CH-6378
Ama-Minions hook (2pk) CH-6379
Ama-Minions hook (2pk) CH-6380
Ama-Minions hook (2pk) CH-6381
I-LONGSTAR Minions wall hook, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme, eziqinile. Iyilayisha kanzima, ingalayisha i-2.5kg; Uma usebenzisa, sicela usize Hlanza udonga kuqala bese ulinamathisela ngemuva kokuthi lomile, bese usula ifilimu lokunamathisela ngemuva kwehhuku bese ulinamathisela odongeni kulungile, kungcono ukulengiswa ngemuva kwamahora ayi-12, kungaba ngaphezulu ihlala isikhathi eside ； Futhi ayinamanzi, sicela ukhululeke ukuyisebenzisa; Futhi ngephethini lama-minions, libukeka linempilo futhi lihle.
Amanxusa hook (3PK) CH-6511
Umkhiqizo: Ama-Minions hook (3PK) Umkhiqizo: LONGSTAR Into: China: CH-6511 Izinto: PVC + ABS + IRON + Viscose glue MOQ: 3000 amasethi Usayizi womkhiqizo: 6.5 * 3.5cm Isisindo somkhiqizo: 59g Carton ubungako: 120sets / CTN Master carton size :: 46 * 35 * 31.5cm Isitayela: induku kahle Abantu abasebenzayo: Ibhokisi lombala womphakathi: Alikho Umbala: ophuzi (ubungabekwa ngokwezifiso) Indawo yokudabuka: ZHEJIANG, CHINA Isitifiketi: LFGB, FDA, ISO9001 ， ISO14001 Umbiko Wokucwaninga Komphakathi: BSCI, I-Starbucks, iWal-Martand, iDisney LONGSTAR Minions wall hook, yenziwe nge-q ephezulu ...
Amanxusa isiphanyeko (5pk / isethi)
Umkhiqizo: Ama-hanger hanger (5pk / set) Igama lomkhiqizo: LONGSTAR Into: China: CH-6395 Izinto: PP MOQ: 3000 amasethi Usayizi woMkhiqizo: Isitayela esingu-44 * 49.5cm: isikhathi eside abantu abafanelekayo Abasetshenziswayo: Ibhokisi lombala womphakathi: akukho Mbala: ophuzi (kungenziwa ngezifiso) Indawo Yokudabuka: ZHEJIANG, CHINA Isitifiketi: LFGB, FDA, ISO9001 ， ISO14001 Umbiko Wokucwaninga Komphakathi: BSCI, Starbucks, Wal- IMartand, i-Disney LONGSTAR Minions hanger, yenziwe ngezinto eziphezulu zekhwalithi, ...
Amanxusa isiphanyeko (2pk / isethi)
Umkhiqizo: Ama-hanger hanger (2pk / set) Igama lomkhiqizo: LONGSTAR Into: :: CH-6393 Izinto: PP MOQ: 3000 amasethi Usayizi womkhiqizo: 28.5 * 16.5 * 7cm Isisindo somkhiqizo: 70g Carton quantity ： 60sets / CTN Master carton size ： 44 * 32 * Isitayela esingu-46cm: isikhathi eside abantu abafanelekayo abasebenzayo: izingane Ibhokisi lombala: awukho Umbala: ophuzi (ungenziwa ngezifiso) Indawo yemvelaphi: ZHEJIANG, CHINA Isitifiketi: LFGB, FDA, ISO9001, ISO14001 Umbiko Wokucwaningwa Komphakathi: BSCI, Starbucks, Wal-Martand, Disney I-LONGSTAR Minions hanger, yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, okuyi ...